Isitudiyo esinethala leVipavski Križ
Indawo yam yokuhlala ikufuphi ne-Ajdovščina, emqolombeni wasePostojna (grotto). Uya kuyithanda indawo yam yokuhlala ngenxa yoxolo, indalo, indawo engqongileyo. Indawo yokuhlala ilungele izibini, abahambi abahamba bodwa, kunye neentsapho.
Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngetafile. Kukwakho nesofa eyongezelelweyo kwigumbi apho kukho iibhedi ezimbini ezingatshatanga kunye nebhedi eyibhanti. Igumbi lokulala likwaneTV eneenkqubo ezininzi, kuquka nezangaphandle. I-WI-Fi iyafumaneka. Igama lokugqitha liyabonakala kwigumbi nasekhitshini.
Ilali encinci emva kweendonga. Indawo apho unokuphumla ngokwenene. Iinduli ezikufuphi. Ukukwazi ukuhamba ngebhayisikile kunye nokuhamba. Kukwakho nevenkile yalapha ekhaya enokutya okomileyo okulula, iwayini ezilungileyo zalapha ekhaya kunye nezikhumbuzo.